Tags : ချီးမ များတော့ဘူးနော် ပေါ်တင်ပဲပြောလိုက်တော့မယ်.....ရတာ ယူမယ်လို့ ...ဟက်ဟက်ဟက်ဟက်....
By : myobala on Feb 20, 2010
Score: 40 Rating: 5.00 Comments: 17
ချီးမ များတော့ဘူးနော် ပေါ်တင်ပဲပြောလိုက်တော့မယ်.....ရတာ ယူမယ်လို့ ...ဟက်ဟက်ဟက်ဟက်....
thinkyaing on Oct 24, 2010 0
ThadinKyut Pi How's ? Can find?
pp01 on Feb 22, 2010 0
Your applications have not closed yet since freeman time:D don't take so long...:D I like this song so much whoever sing it, listen until end..GREAT JOB:D*****************
KoBurma on Feb 21, 2010 0
ကျွန်တော်ရတဲ့ Information က တမျိုး ... ( ကိုဗလ ... အထီး လေးလား ... အမ လေးလား ... ဘယ်နှလ ရှိ ပြီလဲဗျ ... ဒီကွင်းထဲက စာက ... ကိုဗလ အတွက်သာ ...) ... .....ကောင်းပါပေ့ ... ဆိုလဲဆိုတတ် အသံလဲကောင်း .... ကြိုက်တယ် ... ကိုဗလ အသံ နဲ့ကွက်တိပဲ ... ၅စတားစ် :P:):D
မြို့စာကြီးကလည်းဗျာ....ပြောရော့မယ် ကြံကြံဖန်ဖန်.....အမဆိုလို့ ယင်မတောင် အသန်းခံတာမဟုတ်ဘူး......တမင်ဂွင်ပိတ်အောင်...ဟွန်းးးးးးး....အညင်ကိုကပ်တယ်...ဟဟဟဟ....ကိုဇော်ဇော်အောင်ရေ.....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ......
greenlay on Feb 21, 2010 0
လူပျိုကြီးဆိုထားတာ ကောင်းတယ်ဝေ့ ***** ချေးများနေရင် လူပျိုကြီးဖြစ်လတံ့ :) ၊ မစိမ်းကြားဖူးတာ ပြောပြမယ် .... ယောက်ျားလေးများ အသက် ၁၈ နဲ့ ၂၅ အတွင်းမှာ ပြောကြတာကတော့ ဥစ္စာ ပညာပြည့်စုံပြီး ရုပ်ချောတဲ့ မိန်းကိုပဲလိုချင်တယ်တဲ့ ၊ အသက် ၂၅ နဲ့ ၃၀ အတွင်းရောက်တော့ ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်နဲ့ ပညာလေးရှိပြီး အိမ်မှုကိစ္စနိုင်ရင်တော်ပါပြီတဲ့ ၊ အသက် ၃၀ လည်းကျော်သွားတော့ ချေးမများပါဘူး ရတာပဲယူတော့မယ်ကွာလို့ ပြောကြတယ်တဲ့ .... :P :D
ဟုတ်ပ အဲလိုဖစ်နေဘီ မမစိမ်းရေ့......ဟဲဟဲဟဲ....ခက်တာက ကျွန်တော်က အသက်ကို ၂၅ ကျော်တယ်လို့ ကိုယ့်ဖာသာ မထင်တာခက်နေတယ်....ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့......ပြီးတော့ မမစိမ်းပဲ သင်ထားတယ်လေ....တကယ့်မိုးထဲရေထဲမှာ ချစ်တာတွေ မေတ္တာတွေက အလကားပါဆို.....စိတ်ကူးယဉ်လို့ပဲ ကောင်းတာပါဆို.... ဆို.....ဆို......တားကတော့ မရဘူး...ချစ်ကိုကြီး ကိုစိန်မြင့်လိုတော့ အဖြစ်မခံနိုင်ပေါင်......ဟိဟိဟိ.....မမစိမ်းရေ....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော့.....
arr pay thwar par tel shint .... another nice one ... 5*4u :))))
အကို့ ညီမလေးမဆိုးဘူး....အားပေးရဲသားပဲ....ဟဲဟဲ...ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကွယ်.....တော်ရုံလူဆို အားပေးပါဆိုရင်တောင် လန့်နေတာလေ....
u4gyi on Feb 21, 2010 0
Har.. Bro Ko Bala gyi ka lel lu pyo gyi bawa ko on sale taw mha lar...hahaha. A lo lote nal lay,,,so htar del kg lwon lo.. on sale lote lite ber nel byo... *****
ဟဲဟဲ မလုပ်ပါဘူးချစ်ကိုကြီးရာ......အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့လူတွေစကားနားထောင်ရမယ်လေ......သတိပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော့.........
koaungkhaing on Feb 21, 2010 0
အသံရောအဆိုရော ထုံးစံအတိုင်းကောင်းတာပေါ့.. ညီဗလအသံက ချစ်မွှေးကိုပါတာ..ဒါကြောင့်လဲ....??? ကီးလေးပဲနဲနဲ နိမ့်နေယ်.. ဒါလည်းဘယ်တတ်နိုင်မလဲနော် ဒီပရိုဂမ်က ကီးချိန်းလို့ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ
ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ ချစ်ကိုကြီး....လူပျိုကြီးဖြစ်တယ်ပြောမလို့လား...အားမနာပါနဲ့ဗျာ...ဟဟဟ.........ကောင်မလေးတွေကတော့ ရတာယူမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်လိုက်တာနဲ့ လာကိုအားမပေးရဲတော့ဘူး.....ဒါလည်း ပညာ တမျိုးပဲလေ.....ဟိဟိဟိဟိ...ကျေးဇူးပါနော် ချစ်ကိုကြီး......
ဟားးးးးးးး ကောင်းလှချည်လား ဘရားသားရ အားပေးတယ်ဗျာ ဆက်ဆိုပါ တကယ့်ကို ကောင်းပါပေတယ်ဗျာ
ဂယ်ပေါတာလားဟင်...ဟင်......ဟဟဟဟ....ကောင်မလေးတွေလာအားမပေးတော့ အားပေးတဲ့ ကိုသားငယ်တို့ ၂ယောက်တည်းကပဲ သင့်တော်ရာလူကိုရွေးလိုက်မှ ထင်တယ်..........ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ....ကျေးဇူးပါနော်ညီလေး....( တကယ်လည်းထင်မသွားနဲ့အုန်း...တားတား ကြောက်ကြောက်...ဟိဟိ)
sithunaung on Feb 20, 2010 0
သားသား လည်း ကြောက်တယ်အဲလိုကြီးတော့ မလုပ်နဲ့လေ ဟီးဟီး သားသား က ကူပြီးတော့ ရွေးချယ်ပေးမယ်လေ အဲလိုစိတ်တွေတော့ မတွေး ရဘူးလေ ဟားဟား
ဟာ....အဲဒါမှ ခက်တာပဲ ...သေချာ မရေထားလိုက်မိဘူးဗျ.....ဟားဟားဟားဟား......ကျေးဇူးပါဗျာ.....